I-IFP ithi akaxoshwe ngokushesha uNgqongqoshe wezeMpilo eKZN | News24
I-IFP ithi akaxoshwe ngokushesha uNgqongqoshe wezeMpilo eKZN
Durban - INkatha Freedom Party (IFP) isinxuse ukuba ibhantshi ligcwale umoya ngokushesha kuNgqongqoshe wezeMpilo KwaZulu-Natal, uDkt Sibongiseni Dhlomo.
“Kuphakathi kokuthi abantu baKwaZulu-Natal noma uDkt [Sibongiseni] Dhlomo. Sesizwakalise ukukhathazeka okuningi esikhathini esingaphambilini mayelana nesimo esibi sosizo olunikezelwa ezibhedlela zesifundazwe kodwa [uNgqongqoshe] ushaya indiva futhi izikhalo zethu ziwela emehlweni angaboni,” okhulumela i-IFP, UNcamisile Nkwanyana, usho kanjalo ngoLwesihlanu.
NgoLwesine uDhlomo uchazile esishayamthetho sesifundazwe ukuthi kungani bengekho odokotela abangochwepheshe besifo somdlavuza eMnyangweni wezeMpilo esifundazweni.
OLUNYE UDABA: BUKA: ‘Uphume ngesamagundwane’ uNgqongqoshe umphakathi ufuna ukumudla luhlaza
Ubephendula nombiko weSouth African Human Rights Commission nothole ukuthi uMnyango uhluleke wancama ukunakekela iziguli zakulesi sifundazwe eziphethwe umdlavuza.
UNdunankulu uWillies Mchunu uthi akaboni ukuthi kungani uDhlomo kumele axoshwe.
Kodwa-ke uNkwanyana uthi ubuholi be-African National Congress esifundazweni kumele “benze isinqumo esinzima” phakathi kokuthi ibeke umphakathi noma uDhlomo phambili.
Uthi uDhlomo uhluleke wancama ukukhombisa ubuholi kulo Mnyango. Uthi inqwaba yezibhedlela eKZN “zisesimweni esinzima sokudinga ukulungiswa nokuholela ekuphulweni kwamalungelo omphakathi okunakekelwa kwezempilo.
“Njenge-IFP, sibona ukuthi uNgqongqoshe kumele aphendule ngokwakhe uma kuba nesiguli esishonayo ngenxa yesimo esingesihle ezibhedlela nesiholele ekungagcinweni esimweni esifanele kwezinsiza kanye nengqalasizinda,” uNkwanyana usho kanjalo.